Semalt On Zvinonyanya Kuita MuSeO Anchor Text
Nyaya yeAnchor inhengo yakakurumbira yepeji peji SEO. Inoreva mafiro akavanzika uye backlinks anowanikwa mumutsara kana kuti mutsara webhutaneti. Inowanzoendesa kune imwe nzvimbo inowanikwa paIndaneti imwechete iyo user unotsvaga pairi. Mamwe mazita anoshandiswa pakunyora zvinyorwa anosanganisira chikwata chekubatanidza kana chikwata chekubatana. A hyperlink is a link that is clearly visible since the words are usually blue and color and underlined.
Mashoko anonyanya kufanana anonyatsoshandiswa uye akanyatsogadziriswa semashoko makuru anonyatsotsanangura uye kutsanangura ruzivo rwekutumira chibatanidzwa. Basa ravo guru nderokubatanidza uye kurondedzera kuIndaneti zvinyorwa zvemashoko nemamwe mashoko anowirirana nehurukuro huru yemashoko ekutanga. Saka, zvino, zvakachengeteka kugumisa kuti magwaro ekugadzirisa anobatsira pakuwedzera mamwe mashoko ane chokuita nehurukuro yekukurukura.
Injini dzakatsvakurudzwa kuti dzitore rugwaro rwekunyorera kuti ruone kukosha kwewebhu web blog kana chigadziro kana uchigadzirisa unhu hwehutano. Izvozvo zvinoreva kuti ruzivo rwemaanchor text backlink runofanira kuva rwakakosha uye runobatsira kune ruzivo munyaya huru. SEO nyanzvi dzinoshandisa kushandiswa kwekushandisa kwemashoko anchor mukugadzirisa zvikamu zvakakosha zvechinyorwa kana blog..Andrew Dyhan, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anoti kune mhando dzakasiyana dzemashoko anchor uye vateereri vemuwebhu vanoita kuti vazive zvakanaka.
Zero / Generic Anchor Text - Aya ndiwo mabhesi asingabatanidzi nechokubatanidza. Izvo mazwi asingashandisi uye zvakagadzirirwa kutsvaga zviito zvakasiyana pamusana pemushandisi kuwana mamwe mashoko pasina kuwedzera chero huwandu hwe SEO kune zvinyorwa. Aya ndiwo mazwi akafanana, verenga izvi, verenga zvakawanda pano, tora pano.
Zvakananga Match Anchor Text - Pano, mutsara wechikwata unotarisa mazwi chaiwo emazwi ezviri mukati pezvinangwa. SEO nyanzvi dzinoziva kukosha kwavo mukusimudzira SEO nzvimbo yakakosha. Kunyatsotarisana nheyo yechiratidzo yakave iyo inonyanya kushandiswa yorudzi rwekikisi kuti iwane SEO rankings. Kunyange zvakadaro, inofanira kushandiswa zvishoma kuti irege kuparadzaniswa uye inofanira kufanana nepamusoro-soro ye keywords kuti uchengetedze mararamiro emhuka evashandisi.
URL - Iyo inozivikanwa seye URL yakashama, haina mhemberero yakagadziriswa, uye chete kunyoresa mazano kunowanikwa munzvimbo yayo. Zvinosuruvarisa, zvibatanidza zvakadaro zvinogona kuwedzera huwandu hweSOO hunokosha kune webhusaiti yako saka zvinodikanwa kuti uzvishandure kuva mamwe mazita ezvinyorwa zvekubatanidza.
Branded Anchor Text - The anchor pano ndiro zita rekushandisa uyewo izwi rekutanga.
Hybrid Anchor Text - Rudzi urwu runobatanidza SEO kukosha kwezvinyorwa zviviri uye zvisiri zvinyorwa.
Chikamu Chine Chikamu Anchor Text - Inosanganisira kushandiswa kwemashoko anobva mumapeji chaiwo kana mutsara-marefu mashandisirwo emamwe mazwi akafanana.
Nzira dzakanakisisa dzinofanira kuonekwa paunowedzera rugwaro rwechimbo. Itai kuti ionekwe zvakasununguka uye shandisa mhando dzakasiyana dzemashoko anchor mubhuku rako re blog. Kuparadzanisa uye kushandiswa kwezvinyorwa zvisingabatsiri zvichaita kuti webhusaiti yako ive nenhamo nevanotsvaga injini.